Ikhamera eQokelelweyo yeBhotile eNamanzi efihliweyo, 1920 * 1080P, Ukurekhoda iimitha eziyi-180, ikhadi le-TF upto 64GB (SPY043) | Izisombululo ze-OMG
Ikhamera ye-OMG yeBhotile yoqobo efihliweyo yeCamera, 1920 * 1080P, Ukurekhoda iimitha eziyi-180, iKhadi le-SD upto 64GB (SPY043)
Le khamera ye-2017 iphathekayo ye-1080P yeebhotile yokuhlola i-spy efihliweyo inokwenza ixesha langempela lokurekhoda nevidiyo; Kulula kuwe ukuba uyixhume kwiPC yakho ukujonga ukuba yeyiphi na ikhamera erekhodiweyo
Ngekhamera enkulu efihliweyo ye-HD, Isisombululo ngu: 1920 * 1080 kunye ne-30fps; Le nkampani ye-spy efihliweyo jikelele iyayithanda ibhotile ebhakabhaka eqhelekileyo, kwaye ungayisebenzisa njengebhotile yangempela unokurekhoda iividiyo, lo mbono ulungele nawuphi na umcimbi
Le khamera ifihliweyo ineendlela ezimbini zokurekhoda. Imowudi yokujonga intshukumo: Ngenisa imo yokulinda, kwaye ucinezele ezantsi, Iqala ukurekhoda, Kwaye uqhubeke ucinezele ezantsi Kabini, iya kuqala ukubonwa kokuhamba. Ukurekhoda lonke ixesha: Akukho mfuneko yokucinezela ezantsi kwamandla kabini. Ukurekhoda kweluphawu ngokuzenzekelayo kubhala ngaphezulu kweefayile ezindala ukuba imemori igcwalisa. Awusoze uyiphose into nokuba imemori izalisa
Le yibhobho yamanzi yangempela, iyayithwala ukuba uyithathe kuyo naphi na ukuya kuyo. Xa uhlala kwigumbi lokufundela, Unokurekhoda izifundo zakho kunye nexesha elonwabileyo kunye nabo ofunda nabo; Xa uhamba naphi na ukuya kuyo nayiphi na intlanganiso, kuyinto eqhelekileyo yokujonga ukuba uyisebenzise ngaphakathi okanye ngaphandle
Ikhadi le-8GB elihambisekayo (iklasi ye-10) ibandakanyiwe, kukho inkxaso ye-400mAh yebhetri oqhubeka nokurekhoda malunga neMizuzu engama-180, ukurekhoda kweLoop ngokuzenzekelayo kubhala ngaphezulu kweefayile ezindala, Ukuba imemori iyazalisa. Awusoze uyiphose into nokuba imemori izalisa.
Inkqubo yokuLawula: Generalplus 1247
Izinto zeZitikha: Iphepha le-157g Coated (i-10 Pieces)
Imodeli yeLens: GC 1024
Battery umthamo: 400mah Cobalt efanelekileyo
Izinto zeBhola: Ukungena kwi-PET yeBakala lokutya
Isombululo seVidiyo: 1920 * 1080P AVI
Inkxaso yeTF: Ixhomekeke ku 64GB
Ukusebenza Ubomi: Ukufikelela malunga 180 mins xa uhlawula ngokupheleleyo.
Hlela ixesha: Yenza Ifayile enegama "time.txt"
Ukuhlawula: 5V ishaja
Ubukhulu bebhokisi yokuthengisa: 230*120*75mm/ 9*4.7*3 in
I-1080P Iphulo leManzi leKhamera elifihliweyo
Olu hlobo olutsha lwe-2017 lweTyhuphu leTyhuphu leKhamera yamanzi efihliweyo, lenziwe ngekhwalithi elungileyo, Inkxaso yeKhadi eliKhulu lokuKhumbuza yi-Micro SD 64GB, kwaye kukho i-400mAh ukuba uqhubeke Urekhoda malunga neeyure ze-3, Ukuba uqala ukuFika kweMpawu eSebenzayo, iya kubhala Xa Kukho umzimba ohambayo, Uzogcina ixesha lokurekhoda ngaphezulu.
(1) Leli phulo leManzi eliMfihliweyo eliKhejiweyo liza Kubeka iliso kwaye likhuseleke ngaphakathi. Njengaye: Ikhaya lakho, iiOfisi, iiGaraji, iSitolo esincinci, iBha, ii-Showrooms, iiDisksi zeeNkonzo, iiSitolo, iiLobbies, iCar kunye nayiphi na into ofuna.
(2) Gcina iNgqungquthela ebhaliweyo kwiiNkcazo zonke zeBusiness ofuna.
(3) Ukuqwalasela imisebenzi yezoBugebengu, njenge: Uba, ukuLawulwa, kunye nokuHlulwa kweMveli.
(4) Ukurekhoda ixesha elonwabileyo nosapho lwakho.
(1) Ngaphandle kwe-Wifi unako ukuRekhoda imeko yakho yokuHamba yoMtshato okanye ezinye iZiganeko eziMnandi zangaphandle.
(2) Ukurekhoda i-Lesson okanye i-Classmates yakho kwimisebenzi yangaphandle.
Okokuqala, cinezela amandla phantsi kwe-2 yesiBini kwiBhodi yeBela, kwaye ukukhanya kwe-Yellow indicator kuya kutshabalalisa, kwaye kungena kwimodi yokulinda
Okwesibini, ukuba ufuna ukurekhoda lonke ixesha, umane ucinezela ngexesha elide, kwaye ukukhanya okuphuzi kuya kutshintsha amaxesha e-3 kwaye icime, Qala Ukurekhoda, Xa ufuna ukurekhoda ukurekhoda, cindezela nje ixesha elide, kwaye iya kufaka imodi yokulinda.
Okwesithathu, ukuba ufuna ukuvula i-Motion Activated Detection, Vula ikhamera Vumela ukungena kwimodi yokulinda, uze ucindezele i-Bottom kwixesha eliphindwe kabini, ukukhanya kwe-yellow indicator kuya kutshintsha amaxesha amahlanu, kwaye Kuya kuqalisa iirekhodi, xa kukho i-Body Movable.
Indlela yokubeka ixesha levidiyo
Sebenzisa i-USB qhagamshela ikhamera kwiKhompyuter yakho, kwaye wenze i "Time.txt" kwaye uyigcine kwiKhadi le-SD, faka ixesha kwi-TXT, Umzekelo: 2017-05-18 23:59:59, emva koko utsalele ezantsi Ukusuka kwikhompyuter, Qala kabusha iKhamera, emva koko unokurekhoda iividiyo ngexesha.
1. Ngenxa yokuba ixesha elide lothutho, ungcono ukutshaja ibhetri ngaphambi kokuyisebenzisa.
2. Iya kudinga malunga neeYure ezimbini ukutshaja ibhetri, xa igcwaliswe ngokupheleleyo, iya kuyeka ukutshaja ngokuzenzekelayo.
3. Le bhotile yaManzi ifihliweyo Ikhamera yokuHlola ayifuni Qhagamshela i-WiFi, enokubakho naphi na, uHlengahlengisa abantu abathanda ukurekhoda kwaye bathande ukugcina imemori exabisekileyo kunye nezinye iinjongo zokuRekhoda.
9.3 x 4.7 x 3 intshi
I-SPY043 -Ikhamera yeBhotile yamanzi eyiNqobo ePhathekayo
19386 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-41 Namhlanje